नातिनीको बयान , ‘ हजुरबाले मलाई रातैभरी बलात्कार गरे’
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रिका/अनलाईनहरु » नातिनीको बयान , ‘ हजुरबाले मलाई रातैभरी बलात्कार गरे’
काठमाडौं । मेरो नाम पूजा । मेरो यो नाम सक्कली होइन । काभ्रेमा बुबा र हजुरबुबाबाट एउटा किशोरी बलात्कृत भएको समाचार पढ्नुभएकै होला । हो, तिनै अभागी बलात्कृत किशोरी हुँ म ।
जसले मलाई बलात्कार गरे, तिनलाई मन नलागि नलागि बुबा भन्दैछु म । अब उनलाई बुबा भन्ने पक्षमा म छैन । जसले मलाई बारम्बार बलात्कार गरे, तिनलाई बुबा भन्नु कि पति ?
पहिलो श्रीमतीबाट चार छोरी भएपछि छोरा जन्माउन मेरो आमालाई बिहे गरेकारे उनले । तर मेरी आमातिरबाट पनि छोरीकै रुपमा म जन्मिए । त्यस्ती छोरी भएर जो आफ्नै हजुरबा र बुबाबाट बलात्कृत हुन पर्यो । बुबा हरेक दिन रक्सी खाएर आउने अनि आमालाई पिट्ने । मलाई समेत टिपेर फ्याकिँदिने । उनी घरमा आउँदा भुइचालो लिएर आउथे । हामी डरले थरथर ।
म भुईमा सुत्ने हजुरबुबा खाटमा । म त्यतिबेला ६ कक्षामा पढ्न थालेकी थिए । एकराति आकाश गर्जन थाल्यो । चट्याङपर्यो । म डरले सिरकभित्र गुटुमुट भएर सुँते । मेरो अवस्था देखेर हजुरबुबाले सोधे जोडो भयो ? हजुर हो, मैले भने । त्यसपछि उनले भने त्यसो भए आइज खाटमा, म सँगै सुत । त्यसपछि गएर म खाटको भित्ता पट्टि सुते ।
हजुरबाले मलाई तानेर उनीसँगै सुताए । केही क्षणपछि उनले मेरो कम्मरमाथि खुट्टा राखे । सिरक भित्र किस गर्न थाले । क्रमैसँग मेरो हात उनको गोप्य अंगमा लगेर भने चलाईदे । त्यस्तो आग्रहपछि उनले आफ्नो हात मेरो स्तनमाथि राखे । उनले आफ्नो जंगली हर्कत देखाउँदै लुगा फुकाल्न लगाए ।
मलाई तल सुताएर म माथि चढे । उनको पञ्जाबाट उम्कन खोजे र रुदै भने, ‘हजुरबा मलाई दुख्यो छाड्नोस् न के गर्नु भा को ?’ हजुरवाले झर्किदै भने , ‘तैले जाडो भयो भने्को होइन, तातो पार्न ला को नि’ । हजुरबाले चुप लागेर बस । म जे–जे भन्छु त्यही मान भनेर उल्टो थर्काए । त्यसपछि के भो थाहा भएन ।
बिहान ७ बजे होस आउँदा ओच्छ्यानभरि रगत थियो । रगत लागेको तन्ना अर्को कोठाको कुनामा लगेर राखेपछि मलाई भने, ‘तेरो मिन्स भएछ, हेर् त रगत बगेको हिड अस्पताल जाउ ।’
अस्पतालमा के – के कुरा गरे मलाई थाहा भएन । औषधि खान थालेको १० दिनपछि मेरो रगत बग्न छाड्यो र म स्कुल जान थालें । आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।